1XBIT Rosiana, an'ny orinasa N. V. Company1X Corp. ary nahazo alalana tao Curaçao. Ny tanjonao? Fandresena ny tontolon'ny lalao lalao amin'ny Internet. Ahoana no? Miaraka amin'ny tsenan'ny katalazana lehibe indrindra ary marobe bonus be dia be noho isika (ary ireo) tsy mbola nahita. Ary miresaka momba ny bonus fiarahabana isika […]
ny tambajotra midadasika amin'ny fiaraha-monina Unibet Casino Unibet. Ary ny fahazoan-dàlana any Malta (SMG), ny orinasa swedish dia manana ny sasany amin'ireo lalao an-tserasera casino tsara indrindra, satria mampiasa rindrambaiko telo tsara indrindra toy ny Net Entertainment izy, Microgaming o Yggdrasil. Fa ny mavesan'ny NetEnt mihoatra ny telopolo […]
Rehefa Bwin, eny, na dia eo aza ny anarana taloha hoe Betandwin, teraka tao Vienna in 1998, zara raha misy afaka milaza mialoha ny lalan'ny fahombiazana. Mbola mihoatra noho ny 22 mpanjifa an-tapitrisany maro no efa nanokana vola tamin'ny fanatanjahan-tena nataony, izay nanjary iray amin'ireo mpilalao manerantany amin'ny lalao iraisam-pirenena. Na dia somary ampy aza ny haja […]
Ao ambadiky ny 888sport sy ny famantarana, vondrona malaza eran'izao tontolo izao 888 Fitaovana PLC. avy amin'ny 2008, ny orinasa dia manolotra poker sy casino sy fifaninanana ara-panatanjahantena. marika haingana dia nahazo laza ho toy ny tokantrano trano manaja sy manintona. Ao anatin'ny famakafakana anay, hanara-dia akaiky ny mpandraharaha izahay amin'ireo olana lehibe momba ny fitantanana […]
Raha ny anarana lehibe eo amin'ny indostrian'ny fanatanjahantena iraisam-pirenena any Paris, tsy afaka manilika ary ny mpanome serasera an-tserasera Betfair.To Angletera, Exchange Stock Exchange eken'ny rafitra. avy eo, andao hijery akaiky ny fanatanjahan-tena amin'ny sokajy rehetra mifandraika amin'izany. Izany no laharam-pahamehana? Ahoana ny fomba atokisan'i Paris? Misy bonus ihany […]
Na dia manana traikefa manankarena, marika hita any Espana tamin'ny volana lasa. Eto amin'ny firenentsika, nankatoavin'ny talen'ny jeneraly jeneraly amin'ny filokana (DGOJ) ny faran'ny data, ka afaka matoky ny fiarovana amin'ny sehatra izahay. Ny maoderina Sport nomen'ny Espaniola ary mahafinaritra kokoa any Paris dia afaka manitsy ny […]
Ny filalaovana anjara toerana mahafinaritra kokoa ao an-trano dia zavatra fantatry ny rehetra, fa marina koa anefa fa manala ny habakabaka ao amin'ny casino. Fa maninona isika no mila miandry ny faran'ny herinandro hankany amin'ny casino sy mankafy ny lalao? Ity dia orinasa boribory, izay tompony […]
Interwetten dia iray amin'ireo mpamatsy filokana amin'ny fanatanjahantena malaza any Eropa. Ny orinasa Austrian dia naorina tao 1990 por Wolfgang Fabian; tamin'izany fotoana ho mpianatra ny toekarena, tanora mpandraharaha izay sahy niditra tao amin'ny indostrian'ny lalao. in 1996, Nandeha an-tserasera aho ary nanomboka ny voalohany tany Paris. […]
Rehefa mamorona teknolojia vaovao isika, Afaka miditra ao amin'ny tranokalany i Luckia hanatratrarana ny maha izy azy ankehitriny. Zava-dehibe ho an'ny orinasa ny mampafantatra ireo mpampiasa amin'ny karazana fanovana rehetra mba hahatonga ny traikefa amin'ny filokana araka izay tratra.. ihany koa, ny lalao ao amin'ny efitrano lalao, efitrano […]
Raha mandeha any amin'ny tranonkalany ianao, tsy ho ela dia ho hitanao fa misy alokaloka sy be dia be ny alalana, lafin-javatra roa fototra ho an'ny mpilalao rehetra izay te hankafy ny fotoam-pivarotana lalao. Ny tanjon'ity tranokala ity dia ny hanome ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpilalao ary mahazo aina 5 taona traikefa an'ity orinasa ity […]